Apple dia nandany $ 38 tapitrisa amin'ny dokam-barotra Apple Watch tamin'ny volana lasa fotsiny | Avy amin'ny mac aho
Apple dia nandany $ 38 tapitrisa amin'ny dokam-barotra Apple Watch tamin'ny volana lasa fotsiny
Androany dia azonao atao ny mitahiry ny Apple Watch any amin'ny firenena sasany, ary Apple dia tsy miondrika amin'ny doka amin'ny famantaranandro ara-potoana indrindra amin'ny fotoana (rush hour), any Etazonia, hanandrana hamoaka tahiry anio.
Hatramin'ny nanehoana ilay fiambenana tamin'ny hetsika tamin'ny 9 martsa, nandany fotoana be i Apple $ 38.000.000 amin'ny fampielezan-keviny amin'ny fahitalavitra, araka ny tarehimarika avy amin'ny iSpot.tv, izay manara-maso ireo dokambarotra fahitalavitra amerikana sy valiny nomerika amin'ny fotoana tena izy.
Ity fandaniana ity dia ambany kely noho ny 42 miliara dolara izay nandanian'i Apple tao anatin'ny dimy volana lasa tamin'ny doka amin'ny fahitalavitra ho an'ny iPhone 6 sy 6 Plus. Tsy toy ny iPhone 6, izay namorona zana-kazo iray mpanjifa mahatoky, ny Apple Watch no vokatra vaovao voalohany nampahafantatra an'i Apple, tamin'ny alàlan'ny CEO Tim Cook.
Ny iPhone 6 dia ho voavaha avy hatrany. Saingy miaraka amin'ny Apple Watch, izay vokatra vaovao, izay tsy fantatra raha horaisina tsara, dia misy dikany fa matanjaka kokoa ny dokambarotra, hoy ny mpandalina JMP Alex Gauna.
Araka ny efa fantatsika androany dia azonao atao ny miambina ny famantaranandro any amin'ny firenena sasany, ary nisy mpitondra tenin'ny Apple iray nanontaniana, izay tsy nety naneho hevitra momba ny paikadin'ny varotra an'ny orinasa.
Amin'ireo doka rehetra novidian'i Apple, efa ho ny antsasaky ny tamin'ny fotoana voalohany, "Ny maty mandeha", (NCAA) Fifaninanana Basketball sy National Scouting Program ho an'ny Collegiate nasionaly "Ny feo".
Araka ny efa hitantsika nandritra ny taona maro, na dia toa a fandaniam-bola be loatra amin'ny doka, tsy. Apple dia nitahiry vola be tamin'ny dokambarotra, satria ny drafi-barotra, ny ankamaroany dia mifototra amin'ny tsaho, vokatr'izay resahina ao amin'ny Internet tsy tapaka ny vokatr'izy ireo.
Manontany tena aho raha ho araka ny nampoizina ny fandraisana ny Apple Watch, raha hanana ho avy ny fitaovana eo amin'ny tanana. Ary raha tsy ampy ny manana apetaho amin'ny plug miaraka amin'ny iPhone sy iPad, ary masochites isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Apple dia nandany $ 38 tapitrisa amin'ny dokam-barotra Apple Watch tamin'ny volana lasa fotsiny
Apple lisitra ny 2009 MacBook Pro, iMac ary Mac mini ho lany andro
Security Update 2015-004 dia azo alaina ho an'ny OS X Mountain Lion sy OS X Mavericks ankehitriny